पाकेट मारेरै घर–गाडी :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
चोरी गरेको धनले कति दिन पुग्ला ? दुई दिन, चार दिन वा एक–दुई महिना ? जवाफ हुन सक्छ– केही दिन, केही महिना वा केही वर्ष । तर अचम्म † कोही यस्ता चोर छन्, जसले चोरेकै भरमा आफू मात्र होइन, परिवारलाई विलासी जीवन बिताउन सघाइरहेका छन् । त्यो पनि एक वर्ष, दुई वर्ष होइन, वर्षाैंदेखि । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
तिनै चोर, जो अहिले प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । अर्काे आश्चर्य, चोर श्रीमान्लाई छुटाउन प्रहरीका लागि लाखौं तिर्न तयार श्रीमती पनि पक्राउ परेकी छन् । -श्रीमान् छुटाउन मध्यरातमा पैसा बुझाउन आउने महिला पक्राउ
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ८, २०७४, ०७:१५:५१